DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA ONYE NBIPUTE SAMSUNG ML-2160 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Na nbudata onye nyocha ọkpụkpọ Samsung ML-2160
N'oge ọrụ nke smartphone, ihe dị iche iche nwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, ọdịda ya n'ime mmiri. Ọ dabara na, smartphones nke oge a na-adịchaghị mfe mmiri, ya mere ọ bụrụ na kọntaktị na mmiri dị mkpụmkpụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịda mbà.
Ngwá Ngwá Ngwá Ọkụ
Ọtụtụ ngwaọrụ nke oge a na-enweta nchebe pụrụ iche site na mmiri na ájá. Ọ bụrụ na ịnwere ụdị ekwentị ahụ, ị ​​gaghị atụ egwu maka ya, ebe ọ bụ na enwere ihe ize ndụ maka ịrụ ọrụ naanị mgbe ọ dabara omimi karịa 1.5 mita. Otú ọ dị, a ghaghị elele anya nke ọma ma a na-emechie ebe niile (ọ bụrụ na ha na-ewu ya), ma ọ bụghị ihe niile nchebe megide mmiri na ájá ga-aba uru.
Ndị nwere ngwaọrụ ndị na-enweghị oke nchedo mmiri ga-eme ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e jiri mmiri mee ka ha dị n 'mmiri.
Nkeji nke 1: Nzọụkwụ mbụ
Ihe arụ nke ngwaọrụ ahụ dabara n'ime mmiri dabere na omume ndị ị na-eme na mbụ. Cheta, ọsọ dị mkpa na nhazi mbụ.
Nke a bụ ndepụta nke ọrụ ndị bụ isi dị mkpa maka "ịjụgharị" nke ama ama ejiri na mmiri mmiri:
Wepu ngwa ngwa na mmiri. Ọ bụ na nzọụkwụ a na ọnụ na-aga na nke sekọnd.
Ọ bụrụ na mmiri abanye n'ime ya ma na-etinye aka n'ime "ihe mkpuchi" nke ngwaọrụ ahụ, nke a bụ 100% nkwenye na ọ ga-ebugharị ma ọ bụ tụfuo ya. Ya mere, ozugbo i nwetara mmiri ahụ, ịkwesịrị ikpochapụ ikpe ahụ ma gbalịa wepu batrị ahụ. Ọ bara uru na-echeta na ụfọdụ ụdị nwere batrị na-enweghị ike iwepụ, na nke a ọ ka mma ịghara imetụ ya aka.
Wepu kaadi niile site na ekwentị.
Nkeji nke 2: nhicha
Ọ bụrụ na mmiri abanye n'ime ikpe ahụ ọbụlagodi na ole na ole, ihe mkpuchi niile nke ekwentị na ikpe ya kwesịrị kachaa. Ejila onye na-eji ntutu ntutu ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya maka ihicha, n'ihi na nke a nwere ike imebi ọrụ nke mmewere n'ọdịnihu.
Usoro nke ihicha ihe nke smartphone nwere ike kewaa n'ime usoro:
Ozugbo ekwentị disassembled kpamkpam, hichaa ihe niile dị na mbadamba owu ma ọ bụ akwa akọrọ. Ejila ajị anụ nkịtị ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ maka nke a, ebe ọ bụ na mgbe akwukwo ahụ dị ntakịrị, akwụkwọ / ajị anụ ahụ nwere ike ịgbaji, obere ihe ndị ahụ ga-adịgidekwa na ihe ndị ahụ.
Ugbu a, kwadebe ụyọkọ nke mbụ ma debe nkọwa nke ekwentị na ya. Ị nwere ike iji akwa nhicha na-agụghị akwụkwọ kama nchara. Hapụ akụkụ maka otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka mmiri wee laa kpamkpam. Ịkwanye ngwa ngwa na batrị, ọ bụrụgodị na ha dị na akwa / akwa akwa, anaghị atụ aro ya, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbanye na ya.
Mgbe ihichachara, jiri nlezianya lelee ngwa ndị ahụ, leba anya na batrị na ikpe ahụ n'onwe ya. Ha ekwesịghị ịnọgide na mmiri na / ma ọ bụ obere mkpụrụ. Jiri nlezianya na-agafe ha na ahịhịa siri ike iji wepu ájá / irighiri.
Kpọkọta ekwentị ma gbalịa gbanye ya. Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, soro ngwaọrụ ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ịchọta nke mbụ, ọbụna obere nsogbu, kpọtụrụ ụlọ ọrụ iji dozie / chọpụta ngwaọrụ ahụ. N'okwu a, ọ dịghị atụ aro ka ị kwụsị oge.
Onye na-adụ ọdụ ka ọ kpoo ekwentị n'ime ihe ndị nwere osikapa, ebe ọ bụ ezigbo ihe ntinye. Na akụkụ, usoro a dị irè karị karịa ntuziaka ndị e nyere n'elu, ebe ọ bụ na osikapa na-amịkọrọ mmiri karị na ngwa ngwa. Otú ọ dị, usoro a nwere ihe ndabara dị ịrịba ama, dịka ọmụmaatụ:
Mkpụrụ na-etinye uche na mmiri nwere ike ịmị mmiri, nke agaghị ekwe ka ngwaọrụ ahụ kpochapụ;
N'ebe osikapa, nke a na-ere na nchịkọta, ọtụtụ obere ihe mkpofu na-enweghị ike ikpuchi emeri nke na-arapara na ihe ndị ahụ na n'ọdịnihu nwere ike imetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị ka kpebiri ịkụ na-eji osikapa eme ihe, mee ya na nsogbu nke onwe gị. Nzọụkwụ site na ntụziaka na nke a yiri ka ọ dị ka nke gara aga:
Ihichapu akụkụ na akwa ma ọ bụ akọrọ akwụkwọ na-ehichapụ. Gbalịa wepụ ihe a site na mmiri dị ka o kwere mee.
Kwadebe otu efere na osikapa ma jiri nlezianya kpoo ikpe na batrị ahụ.
Wụ ha osikapa ma hapụ maka ụbọchị abụọ. Ọ bụrụ na kọntaktị na mmiri dị mkpụmkpụ ma na nyocha na a hụrụ obere mmiri mmiri na batrị ndị ọzọ, oge ahụ nwere ike belata ruo otu ụbọchị.
Wepu mmiri si osikapa. N'okwu a, ha ga-ehichachaa ya. Ọ kachasị mma iji kpochapụ ihe dị iche iche nke e mere maka nke a (ị nwere ike ịzụta ha na ụlọ ahịa ọpụrụiche ọ bụla).
Chịkọta igwe ma gbanye ya. Hụ ọrụ ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, ọ bụrụ na ị hụ ọkwa ọ bụla / malfunctions, kpọtụrụ ọrụ ahụ ozugbo.
Ọ bụrụ na ekwentị adaba na mmiri ahụ, kwụsị ọrụ ma ọ bụ malite ịrụ ọrụ na-ezighi ezi, ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ na arịrịọ iji weghachite ọrụ ya. Ọtụtụ mgbe (ọ bụrụ na mmebi ahụ adịchaghị ịrịba ama), ndị nwe ụlọ na-enwetaghachi ekwentị ahụ.
Na obere oge, ịnwere ike ịmezi n'okpuru akwụkwọ ikike, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na njirimara ekwentị gosipụtara nchebe dị elu megide mmiri, ma mebie mgbe i tinyere ya na mmiri ma ọ bụ wụsara mmiri mmiri na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ nwere nchebe pụọ na ájá / mmiri, dịka ọmụmaatụ, IP66, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnwa ịchọta nrụzi n'okpuru akwụkwọ ikike, ma ọ bụrụ na kọntaktị ahụ na mmiri dị ntakịrị. Ọzọ, nke dị elu karịa nọmba (dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị IP66, kama IP67, IP68), ọganihu ịnweta ọrụ n'okpuru akwụkwọ ikike.
Iji reanimate ekwentị na abanye n'ime mmiri abughi ihe siri ike dika o yiri ka o na-ele ya anya. Ọtụtụ ngwaọrụ nke oge a na-enweta nchebe dị elu karị, nke mere na mmiri a wụfuru na ihuenyo ma ọ bụ obere kọntaktị na mmiri (dịka ọmụmaatụ, ịdaba na snow) enweghị ike imebi ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.